သုံးပေခွဲတစ်ယောက်အိပ် အဆင့်မြင့် ကုတင် (ALTO)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ သုံးပေခွဲ အကျယ်ရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဇိမ်ခံ တစ်ယောက်အိပ်ယာ/ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်အား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၄၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တံခါးသုံးချပ်ဖွင့် အဝတ်ဘီရို (GRAPHIO-PLUS)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ တံခါး သုံးချပ်ပါရှိ၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စမ်းသစ် လှပသေသပ်သော အဝတ်အစားဘီရိုအား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၄၉၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ခြောက်ပေအကျယ် ဇိမ်ခံနှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် (GEO)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ ခြောက်ပေအကျယ်ရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဇိမ်ခံ နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်အား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၃၆၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အရည်သွေးမြင့် တစ်ယောက်အိပ် ကုတင်(GRAPHIO)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ သုံးပေခွဲ အကျယ်ရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဇိမ်ခံ တစ်ယောက်အိပ်ယာ/ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်အား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၄၃၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဝတ်အစားထည့် တံခါးသုံးချပ်ဖွင့် အဆင့်မြင့်ဘီရို (LINEO)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ တံခါး သုံးချပ်ပါရှိ၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စမ်းသစ် လှပသေသပ်သော အဝတ်အစားဘီရိုအား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၄၆၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သုံးပေခွဲ အကျယ် ဇိမ်ခံတစ်ယောက်အိပ်ကုတင် H-KINDER-B
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ သုံးပေခွဲ အကျယ်ရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဇိမ်ခံ တစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာအား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၂၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ငါးပေအကျယ်ရှိသော ဇိမ်ခံနှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် (ROSALIND)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ ငါးပေအကျယ်ရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဇိမ်ခံ နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာအား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၃၆၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် အရည်သွေးကောင်းမွန် အလှပြင်ပစ္စည်းတင်စင်/အဝတ်စင်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်၊ အဆင့်အတန်းပြည့်မှီ၊ အိပ်ခန်းသုံး၊ ဟိုတယ်သုံး၊ အဝတ်အစားတင်သောစင်၊ အဝတ်အစားတင်သော စားပွဲ ၊အလှပြင်ပစ္စည်းများတင်သောစင် များကို Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ သုံးသိန်းရှစ်သောင်းငါးထောင် ကျပ် ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်၊ အဆင့်အတန်းပြည့်မှီ၊ အိပ်ခန်းသုံး၊ ဟိုတယ်သုံး၊ အဝတ်အစားတင်သောစင်၊ အဝတ်အစားတင်သော စားပွဲ ၊အလှပြင်ပစ္စည်းများတင်သောစင် များကို Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း ကျပ် ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
We also haveavariety of bathroom cabinets in various sizes and designs and we guarantee that these cabinets will giveatouch of beauty and elegance to your bathroom. သင့်ရေချိုးခန်းကိုပိုမိုလှပတင့်တယ်စေမည့် ကတ်ဘိနက် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ဆိုဒ်အမျိုးမျိုး ဖြင့် Shwe Myitta Home Mart မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205
ရုံးသုံး ဆိုဖာ စုံလည် ကုလားထိုင်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး sofa စုံလည်ကုလားထိုင်များမှာ သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စမ်းသစ် လှပသေသပ်သော ရုံးသုံး ဆိုဖာ စုံလည် ကုလားထိုင်အား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၁၈၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် စုံလည် ဆိုဖာ ကုလားထိုင်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး sofa စုံလည်ကုလားထိုင်များမှာ သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စမ်းသစ် လှပသေသပ်သော ရုံးသုံး ဆိုဖာ စုံလည် ကုလားထိုင်အား Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ၁၆၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Myanmar 's largest B2B marketplace for Furniture. You can buy and sell dressing table,chair,table setting,sofa set,home furniture,office furniture,furniture,sofa,bedroom furniture,dining room sets,dining table set,desks,modern furniture&nbsp;&nbsp;in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>